Ungayigcina kanjani i-chinanini ekhaya ukuvuthwa?
Kuze kube yamuva, izithelo ezinjalo ezingavamile, njenge-chinan, sonke sasimangalisa. Ngokushesha nje lapho ebonakala emashalofini ezitolo, ngemuva kwakhe wafaka imigqa emikhulu - bonke befuna ukuzama izithelo ezishisayo ezishisayo. Izingane zafika ekuthokoziseni okungenakulinganiswa, njengoba zithole ukuphathwa okunjalo njengesipho. Namuhla, isimo sesishintshile ngokuphawulekayo, izithelo nemifino ezivela kwamanye amazwekazi kuye kwaba yinto elula. Asikwazi kuphela ukunambitheka kwabo futhi sifunde ukupheka izitsha ezihlukahlukene ezimnandi, kodwa futhi sazisa izinzuzo zale mikhiqizo. Kodwa ingabe sonke siyazi ukuthi singagcina kanjani i-ananas ekhaya ngendlela efanele?
AmaTropiki anikezela ngezipho zawo, izithelo zazo zingumcebo ocebile kakhulu wamavithamini nazo zonke izinhlobo zokuwusizo emzimbeni wethu. Ukuntuleka kwethu, thina, abakhileyo ezindaweni ezipholile, sizizwa ikakhulukazi ebusika. Isifiso sokuziqhayisa kanye nabathandekayo ngezinto ezingavamile futhi ezihlwabusayo zikhula ekuseni emaholide asebusika. Izithelo zasemaphandleni zingathengwa kusengaphambili ukuze ugweme ngokweqile ukuphikisana nosuku oludlule. Kodwa ungayigcina kanjani i-ananas emakhaya ngaphambi kokuba uNyaka Omusha futhi ngesikhathi esifanayo ugcine zonke izinzuzo zawo? Akuwona wonke umuntu owazi lokhu.
Umgwaqo uye ekhaya lakho
Ngokuyinhloko, izithelo ezingavamile ziza kithi zingavuthiwe. Zithuthwa yizikebhe zasolwandle, kodwa azikho ngokushesha, futhi ukukhishwa kwamasiko emachwebeni kuthatha okungaphezu kosuku olulodwa. Izithelo ngumkhiqizo obuthakathaka kakhulu, uma ubambezela ukulethwa okuncane, bazovele behlehlise. Ngakho-ke, ikhambi kungaba eyodwa - ukuqoqa izithelo eziluhlaza, futhi inqubo yokuvuthwa izokwenzeka phakathi nohambo. Kodwa ukuthi ungagcina kanjani i-phaphayinti ekhaya futhi ngesikhathi esifanayo unike ithuba lokudoba, wonke ama-exotics kufanele azi.
Ama-apinapula athengiswa kancane, ngakho kufanele athengwe ngezinsuku ezimbalwa ngaphambi kweholide ezayo. Lokhu kuzovumela ingane ukuba ifike ekuvuthweni okujwayelekile, kanti empeleni kuphela ingaba okuhlwabusayo futhi ewusizo. Ukuze wenze izithelo zivuthiwe futhi zingasetshenzisiwe, kufanele wazi ukuthi ungagcina kanjani i- chinanini ekhaya ngendlela efanele.
Uma ufuna ukukhetha uphayinaphu ovuthiwe kakhulu, udinga ukuhamba ngombala wawo kanye nesimo samaqabunga aluhlaza ku-vertex. Akufanele kube okuningi, kanti abaphezulu bayoba nomthunzi ophuzi - lesi yisiqinisekiso sokuthi izithelo zikhule futhi ziyoba ezihlwabusayo. I-pulp ye-chinanali evuthiwe ilanga eliphuzile futhi liphunga elimnandi. Kodwa ngombala wekhasi ukuze uqaphele - umbala omnyama noma obomvu wezikali awusho ukuthi izithelo azivuthiwe. Kungenzeka ukuthi ivuthiwe, umbala uncike kakhulu kulokhu okuhlukahlukene. Ngokuvamile esikhumbeni sezithelo ezivuthiwe zombala ophuzi, utshani noma obomvu obomvu. Ngokukhetha i-ananas elivuthiwe, manje siyaqhubeka nendlela yokugcina i-ananas ekhaya ngendlela efanele nokuthi singakhetha kanjani umkhiqizo wekhwalithi uma sithenga.
Ama-exotics angeniswe ngaphakathi kakhulu ngaphambi kweholide. Ama-apinapula avela kakhulu, kodwa konke okuluhlaza okwedlulele. Ngakho-ke, uma unquma ukuthenga enye yazo, kufanele ufunde kancane mayelana nokuthi ungakhetha kanjani izithelo ezinhle nokuthi ungagcina kanjani i-ananas ekhaya ukuvuthwa kuleli holide.
Okokuqala, qaphela ukubukeka. Izithelo akumele zilimale, zibe nezindawo ezimnyama noma izicabha zesikhunta noma into enjalo. Ubuso bukaphayinaphu akufanele bube buthaka. Amaphilisi - aphuzi, futhi aphelile futhi aphelile. Lokhu kuyisibonakaliso sokuthi izimo zokugcina ziphuliwe, futhi lo mkhiqizo uchithekile. Yeka ukuthengwa okunjalo, noma ngabe intengo iyathandeka kakhulu.
Ungayigcina kanjani i- chinanini ekhaya? Uma uthenge ukuvuthwa ngokuphelele - kungabi ngaphezu kwezinsuku ezingu-3-4, ekamelweni lokushisa. Ungayifaki ezindaweni ezibandayo kanye nomswakama ophezulu. Ngokuvamile, sijwayele ukufaka isithelo esiqandisini-lokhu kuyiphutha, ngakho-ke izithelo zizolahlekelwa ngokushesha ngekhwalithi yayo futhi ziwohloka. Kungcono ukushiya ngqo etafuleni ekhishini noma ewindini lewindi, kuyoba umhlobiso omuhle kakhulu futhi uzozizwa kahle.
Ungagcina kanjani i-chinanini ekhaya, uma kuluhlaza okwesibhakabhaka? Kunezindlela eziningana eziqinisekisiwe, futhi ngamunye wethu sizohlala ngokuningiliziwe.
Hlala ngendlela efanayo nesithelo esivuthiwe - izinga lokushisa ekamelweni, umswakama ophansi kanye nenqwaba yomoya. Ukuze wenze kube mnandi, yivule phansi. Ngesitoreji esinjalo i-ananas ngeke ivuthwe ngokushesha, isikhathi siphezu kwesonto, ngakho-ke uhlele ukuthengwa kusengaphambili noma ukusheshisa inqubo yokuguga.
Ungayigcina kanjani i-ananas emakhaya ngaphambi konyaka omusha, uma isikhathi sisifushane, kanti isithelo sisalokhu sihlaza? Kunendlela - ukusheshisa inqubo ngendlela yemvelo. Izinga lokuvuthwa kwephayinaphu lithinteka yi-ethylene. Hlela kuzungeze isivakashi esinezinye izithelo - amapheya ajwayelekile nama-apula, ama-oran kanye nobhanana - inqubo izohamba ngokushesha kakhulu.
Nakhu enye indlela yokugcina upinapple ekhaya. Kuze kube Unyaka Omusha kunezinsuku ezingu-2-3 kuphela, futhi i-ananasini ibonakala isanda kuqedwa? Ayikho inkinga - zonke izithelo ezifanayo zizosiza, kepha i-ananas kufanele ifakwe ezinhlokweni eziningana zephepha. Hlola ukuvuthwa nsuku zonke: khipha kancane iqabunga phakathi kwephezulu - uma kukhishwa kalula, isithelo sesivuthiwe, sekuyisikhathi sokuhlanza iphepha, kungenjalo kuzodlula ngaphezulu.
Uma kunesikhathi esincane kakhulu ngaphambi kokuqala kweholide, zama ukukhetha izithelo ezivuthiwe kakhulu uma uthenga.
Uma kwenzeka ukuthi i-ananas ihlale ingavunyelwe, futhi impilo yeshalofu iphela, ungadangali. I-Ananas iwumkhiqizo jikelele, kufanelekile ukulungiselela izitsha ezihlukahlukene. Umsebenzi wakho awuwukuthi uchitheke futhi ulungiselele kahle ukugcina okunye.
Ungayisebenzisa ekwenzeni i-dessert noma umane ube "yummy" wetiyi. Lena enye yezindlela ezinhle kakhulu zokugcina, kulesi simo zonke izakhiwo eziwusizo zigcinwe ngokugcwele. Ukuze fruiting, izithelo zihlukaniswe zibe izingcezu noma tincetu, efakwe esiraphu oluhlaza ushukela izinsuku ezimbalwa, bese - sithathwe futhi omisiwe endaweni epholile emnyama.
Ukulungiselela izithelo ezifakiwe kuzothatha isikhathi, ngoba uma i-ananas ehlala encane kakhulu, ingaba iqhwa. Sika ku-cubes, ubeke ungqimba owodwa kwisidlo bese uthumela efrijini. Ngemuva kwezinhlamvu, phinda ungene esikhwameni bese ususa. Zingasetshenziswa ekulungiseleleni ama-dessert, iziphuzo kanye nokuhlobisa izitsha ezihlukahlukene.
Indlela yokuvula ukakhukhunathi ngaphandle komzamo nokuhlukunyezwa?
Mangakhi amagremu envubelo ase-teaspoonful? Izindlela zokubala nezincomo
Ukwakhiwa kwe-shawarma nge-pita isinkwa nenkukhu
Iyini ukusetshenziswa kwama-blueberries empilweni yabantu?
Ngingadla nge-kiwi ikhasi? Sifunda!
"Tserakson" - analogue. "Cere" - intengo, ukubuyekezwa
Igor Botvin: I-Filmography nemininingwane ebusweni bakhe
Indlela yokuqeda ukushintshwa kokukhanya, ukugcina izinyathelo zokuphepha
Umlingo we Ebru ubudala - ukudweba phezu kwamanzi
Tales Saltykov-Shchedrin: uhlu kanye nokuhlaziywa
Indlela ubuyekeze .NET Framework?
Amakilabhu Gay eMoscow: ikheli, izithombe
Izakhiwo Babbitt. Ukwakheka, umkhiqizo, kukhiqizwa futhi kusetshenziswa Babbitt
Khetha ubusika ibhokisi ukudoba